Banyere Anyị - Huacheng Automobile Accessories Co., Ltd.
Companylọ ọrụ Profaịlụ
Huacheng Automobile Accessories Co., Ltd. bụ ọkachamara na imepụta ihe na-ekpochapu valves ruo ihe karịrị afọ 25, nke dị na Hebei Province, valvụ ahụ kwesịrị ekwesị maka nnukwu ụgbọ ala, ọrụ ugbo, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, injin ụgbọ mmiri, igwe na-ewepụta ihe, ụgbọ njem, gas engine na ọgba tum tum.
Ike mmepụta kwa afọ anyị nwere ihe karịrị 8 nde PC nke valvụ dị iche iche. Huacheng ụlọ ọrụ na-gbaara ka ISO / TS16949 na 2008. Anyị valvụ usoro ika na-agụnye American, Japanese, Germany engine nlereanya na nile di iche iche nke anụ ụlọ engine ụdị, ọtụtụ-eji Diesel engine, traktọ, excavators wdg Site akụrụngwa nnyocha okokụre ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa, usoro niile dị n'okpuru njikwa siri ike.
Anyị nwere ndị nyocha onwe ha na ndị otu mmepe, nkwalite teknụzụ na-aga n'ihu yana nkwalite akụrụngwa na afọ ndị na-adịbeghị anya, dịka: ọkụ na-aga n'ihu maka ọgwụgwọ ọkụ, U ụdị quenching na valve obere njedebe, ịgbado ọkụ Steli na oche valve, hụ na ngwaahịa anyị na-agbanwe agbanwe na ntụkwasị obi nke arụmọrụ ma nweta nkwado zuru oke site n'aka ndị ahịa na ahịa. anyị nwere ike ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ dabere na eserese valve ma ọ bụ ihe nlele sitere n'aka ndị ahịa.
Ihe mgbochi mmanya pụrụ iche, 4Cr9Si2,4Cr10Si2Mo, 21-4N, 23-8N, X60, X80, Inconel751,21-4NWNb.
CNC njikọ nhazi akara, na-aga n'ihu ọkụ maka okpomọkụ ọgwụgwọ, esemokwu ịgbado ọkụ, Steli ịgbado ọkụ, U quenching, chrome plating, adụ nitriding
Ọnwa iri na abụọ ma ọ bụ 300000km
Chepụta ma mepụta ngwaahịa ọhụrụ dabere na nlele ma ọ bụ ịbịaru.
Enweghị qty chọrọ maka ngwaahịa.
Anyị niile na-eche ihu ahịa na a "ahịa gbakwasara", na-esi ọnwụ na ebumnobi dị mma "Ngwaahịa efu ntụpọ, Mkpesa ndị ahịa efu", na-enye ọnụahịa na ọrụ asọmpi anyị. Anyị bụ ndị OEM soplaya maka Geely Commercial Vehicle na exported anyị valvụ na USA, Germany, France, Poland, Pakistan na Indonesia.
Obi ụtọ na-anabata ndị enyi si n'akụkụ ụwa niile ma nwee olile anya ịkwado gị, anyị ga-achọ ịnye gị ọmarịcha valves na ọrụ anyị.